Momba anay - Jiangsu Hongchen Optical Co., Ltd.
Vonona hanome ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao i Hongchen
Ireo vokatra dia manana famaritana feno, ary amidy amin'ny faritany sy tanàna 30 mahery any Chine, ary koa Eropa, Amerika ary Azia atsimo atsinanana.
Ny orinasa dia manana tantara nandritra ny 20 taona mahery tamin'ny famokarana sy ny fiasan'ny karazana lantila isan-karazany, miaraka amina famoahana isan-taona mihoatra ny 10 tapitrisa tsiroaroa an'ny lantina resina avo lenta
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana ravin-damina CR-39, jiro roa sosona, hazavana avo roa heny ny tampon'orinasa, andiam-panodinana loko tsy misy fangarony aspheric.
Hongchen optika dia iray amin'ireo mpanamboatra solomaso matihanina lehibe indrindra ao Shina. Izahay no orinasan'ny vondrona ary mifantoka amin'ny solomaso nalahatra mihoatra ny 30 taona nanomboka ny taona 1985. hatramin'ny 200000 m ny tobin'ny orinasan'ny vondrona misy anay2, manana mpiasa mahay 1600 eo ho eo.
Miaraka amin'ny milina AR teknolojia avo lenta any Korea Atsimo 50 sy ny milina Satisloh RX avy any Alemana, dia afaka mamokatra solomaso miisa 300000 farak'izay manana kalitao isan'andro isika Ny lalam-pamokarana rehetra dia nohavaozina tato anatin'ny 3 taona.
Hatramin'ny 2002 rehefa nahazo ny fahazoan-dàlana manafatra sy manondrana isika, Hongchen optika dia efa nanorina fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena sy faritra maherin'ny 50. Izahay dia manome ny mpanjifanay vokatra isan-karazany amin'ny kalitao tena tsara sy ny vidiny mirary.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpanamboatra mpitarika ny solosaina miasa dia mitazona CE, FDA, ISO9001, ISO14001, fanamarinana ny rafitra fitantanana GB / T28001. Ao amin'ny tsena sinoa Hongchen mahazo ny alalana mari-pamantarana marika fantatry ny China.
Amin'ny traikefa sy ezaka efa an-taonany maro eo amin'ny sehatry ny solomaso, te-hanangana ny marika manerantany izahay ary hitombo an-jatony taona orinasa amin'ny ho avy.
Ny fizotry ny fampandrosoana ny orinasa
Miezaha mba handresy ny tsena
Nandritra ny taona maro, ny vondrona Hongchen miaraka amin'ny tanjaka matanjaka, laza tsara, fitantanana kalitao henjana, serivisy avo lenta aorian'ny varotra, dia nahazo ny fankatoavana ny ankamaroan'ny mpampiasa sosialy.
Tontolo iainana HONGCHEN
Andao atomboka ny resaka momba ny tetikadinao